दैलेखमा कोरोनाः कहाँ कति रकम खर्च भयो ? – Enayanepal.com
दैलेखमा कोरोनाः कहाँ कति रकम खर्च भयो ?
२०७७, ९ असार मंगलवार मा प्रकाशित
चामुण्डाविन्द्रासैनीले सुचना दिन मानेन;
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको कोरोना इपिसेन्टर मानिएको दैलेखमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अहिलेसम्म करोडौं रसकम खर्च भएको छ । जिल्लाका ११ वटा स्एथानिय तहमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै उक्त रकम खर्च भएको हो । तर क्वारेन्टाइन भने गुणस्तिरिय नभएको स्थानीयहरुको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा गएको चैत १ गतेदेखि हालसम्म १३ हजार नौ सय ३७ जना भित्रिएका छन् । केहि समयअघि प्रशासनले दैलेखमा भारतबाट करिब ४२ हजार नागरिक जिल्ला भित्रिने अनुमान गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार दैलेखमा हालसम्म जम्मा ७१४ जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनव्यवस्थामपनको लागि भनेर जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिकामा १५ लाख र ४ वटा नगरपालिकामा २० लाखका दरले उपलब्ध गराएको थियो । भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि भनेर प्रतिपालिका नौ लाखका दरले केहि पालिकामा रकम उपलब्ध गराएको थियो । यसरी हेर्दा दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले करिब २ करोड २५ लाख उपलब्ध गराएको देखिन्छ । संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको केहि पालिकाको रकम आयनपुगेको उनिहरुले बताउका छन् ।
तर स्थानीय तहहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अचाक्ली खर्च गरेको पाइएको छ । जिल्लाका चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाबाहेक १० वटा स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणको लागि १२ करोड ९५ लाख बढि खर्च गरेको बताएका छन् । स्थानीय तहहरुले विशेषगरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा उक्त रकम खर्चिएपनि क्वारेनटाइन भने भद्रगोल भएको गुनासो आउन छाडेन ।
दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले भने सुचना दिन आनाकानी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियनत्रणमा नगरपालिकाले कतिरकम हालसम्म खर्च गर्यो भनि नयाँ नेपालले मागेको सुचना दिन आनाकानी गरेको हो । नगरप्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले आफु बाहिर भएको बताएर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई फोन गर्न भने । तर हाकिमले पछि फोन गर्छु भने र पछि फोन नै उठाएनन् लेखालाई फोन लागेन । उता नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहाकार मदन विकले नयाँ नेपाललाई एकछिनमा फोन गर्छु भनि पछि फोन नै उठाएनन । नगरपालिकाका प्रायजसो पदाधिकारीको मोबाइल स्विच अफ थियो ।
आठबिस नगरपालिकामा हालसम भारतबाट १२ सय बढि नागरिक लकडाउन अवधिमा भारतबाट आए । त्योमध्ये हालसम्म २१ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नगरपालिकामा हाचलसम्म कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारबाट करिब २९ लाख मात्रै रकम प्राप्त भएको छ । तर खर्च भने करिब ७९ लाख भइसकेको लेखा अधिकृत दोणदेव वनले जानकारी दिए ।
ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले करिब १ करोड खचृ गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम नेपालिका अनुसार प्रदेशबाट २९ लाखमात्रै प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकामा हालसम्म भारतबाट १३ सय बढि नागरिक भित्रिएका छन् । जसमध्ये ४२ जनाको मात्रै पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । बाँकिलाई आरडीटि गरेर घर पठाइएको छ । हालसम्म गाउँपालिकामा ३ जना कोरोना संक्रमित छन् ।
दुल्लु नगरपालिकामा हालसम भारतबाट ३२ सय बढि नागरिक लकडाउन अवधिमा भारतबाट आए । त्योमध्ये हालसम्म ७४ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नगरपालिकामा हालसम्म कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारबाट करिब २९ लाख मात्रै रकम प्राप्त भएको छ । तर खर्च भने करिब ३ करोड भइसकेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्ञानमणी नेपालिले जानकारी दिए ।
भैरवी गाउँपालिकाले करिब १ करोड खर्च गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका निमिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हिरासिंह थापाका अनुसार प्रदेशबाट १५ लाखमात्रै प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकामा हालसम्म भारतबाट १७ सय बढि नागरिक भित्रिएका छन् । केहिकोे मात्रै पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । बाँकिलाई आरडीटि गरेर घर पठाइएको छ । हालसम्म गाउँपालिकामा १६ जना कोरोना संक्रमित छन् ।
नारायण नगरपालिकामा हालसम भारतबाट १७ सय बढि नागरिक लकडाउन अवधिमा भारतबाट आए । त्योमध्ये हालसम्म २०० जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नगरपालिकामा हालसम्म कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारबाट करिब २९ लाख मात्रै रकम प्राप्त भएको छ । तर खर्च भने करिब २ करोड भइसकेको नगर प्रमुख रत्नतबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
नौमुले गाउँपालिकाले करिब ८४ लाख रकम खर्च गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश कोइरालाका अनुसार प्रदेशबाट २९ लाखमात्रै प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकामा हालसम्म १४३ जना कोरोना संक्रमित छन् ।
महाबु गाउँपालिकाले करिब १ करोड ५० लाख खर्च गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख जंगबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेशबाट २९ लाखमात्रै प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकामा हालसम्म भारतबाट ३३ सय बढि नागरिक भित्रिएका छन् । जसमध्ये ९ सय जनाको मात्रै पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । बाँकिलाई आरडीटि गरेर घर पठाइएको छ । हालसम्म गाउँपालिकामा १८० जना कोरोना संक्रमित छन् ।
भगवतिमाई गाउँपालिकामा हालसम ११ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नगरपालिकामा हालसम्म कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारबाट करिब १५ लाख मात्रै रकम प्राप्त भएको छ । तर खर्च भने करिब ५० लाख भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
गुराँस गाउँपालिकाले करिब ६५ लाख खर्च गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख दिनेश दाहालकाअनुसार प्रदेशबाट १५ लाखमात्रै प्राप्त भएको छ । हालसम्म गाउँपालिकामा ५ जना कोरोना संक्रमित छन् ।
डुंगेश्वर गाउँपालिकाले करिब ६८ लाख खर्च गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बखत खड्काका अनुसार हालसम्म गाउँपालिकामा ६८ जना कोरोना संक्रमित छन् ।